ဘာသာရေး Archives - Padaethar
(၂၄) ပစ်စညျး နစေ့ဉျ ရှတျဖတျပူဇျောခွငျးကွောငျ့ အသကျဘေး မှ (၂)ကွိမျလှတျမွောကျခဲ့သူ….
June 15, 2020 by Padaethar
တစ်ခါ တလေ သနပ်ခါး ရနံ့တွေ ချောက်ထဲကနေ လွင့်တ က်လာ တတ်တယ် ။ အဖေ ကတော့… ဥစ္စာစောင့် ရှိမယ် ထင်တယ်လို့ ပြောတာပါပဲ ။ တစ်နေ့တော့… အဖေက ပြောတယ် ….သားရေ…ဆန်ကုန်တော့မှာမို့ အဖေ ရွာပြန်ပြီး ဆန်သွားယူလိုက်ဦးမယ်နော် ။ မင်းတစ်ယောက်ထဲ ညအိပ်ရဲတယ်မို့လား တဲ့။ ကျွန်တော်ကလည်း ကြောက်စိတ် မရှိတဲ့ အတွက်….ဟုတ် အိပ် ရဲ ပါ တယ်၊ အဖေလို့ ဖြေ လိုက်တာပေါ့… အမှန်တကယ်လည်း ကြောက်စိတ် မရှိပါ ။ အခြောက်မခံရဘူးတော့…ခြောက်တယ်ဆိုတာ စိတ်ထင်လို့ ဖြစ်တာပါလို့ ယူဆထားတယ် ။ အဲဒီညတော့ စောစော စားပြီး ဘုရားရှိခိုးလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့… အမျှမဝေလိုက်မိဘူး။ အရင်နေ့ညက စောစောအိပ်ပျော်ပြီး … Read more
‘ပဋ္ဌာန်းကို နားမလည်ပဲရွတ်ရင် အစွမ်းထက်မထက် နေရာရွေးပြီး ရွတ်သင့်/မသင့် (ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး၏ အဖြေ )’
June 14, 2020 by Padaethar
ပဋ္ဌာန်းကို နားမလည်ပဲရွတ်ရင် အစွမ်းထက်မထက် နေရာရွေးပြီး ရွတ်သင့်/မသင့် (ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး၏ အဖြေ ) မေး။ ပဋ္ဌာန်းဂါထာများရွတ်ဆိုရင်အနက်အဓိပ္ပါယ်နားလည်မှုမရှိပဲရွတ်ဆိုရင် အစွမ်းထက်ပါသလား ? ‌မေး။ ပဋ္ဌာန်းကိုနေရာရွေးပြီး ရွတ်သင့်တယ်၊ နေရာမရွေးပဲရွတ်ရင် အနှောင့်အယှက်အပေးခံရတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ? ဘာကြောင့်လဲ။ ရှင်းပြပေးတော်မူပါဘုရား ။ ဖြေ။ ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်များလို့ သုံးသင့်တယ်ပေါ့နော်။ ဂါထာဆိုတာက သံစဉ်နဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ မင်္ဂလသုတ်တို့ မေတ္တာသုတ် တို့လို ရေးထားတဲ့အရာတွေ ဖြစ်တယ်။ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ကျတော့ စုန္နိယ လို့ ခေါ်တာပေါ့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ရွတ်ဆိုတာ အနက်အဓိပ္ပါယ်နားလည်မှုမရှိပဲရွတ်ဆိုရင်ရော အစွမ်းထက်ပါသလား ဆိ်ိုရင် အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာ အစွမ်းထက်ချင်လို့ ရွတ်တာမျိုး။ တရားတော်တွေကတော့ လူတွေအတွက် တရားစွမ်းထက်ဖို့ရွတ်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါရွတ်ရင် အစွမ်းထက်တယ် ဆိုတာ တန်ခိုးရှိတယ် လို့ ဒီလိုဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူးနော်။အနက်အဓိပ္ပါယ်နားမလည်ပဲရွတ်ဆိုရင်ရော ကုသိုလ်ရပါသလားဒီလိုပဲ မေးသင့်တာပေါ့နော်။ ဘုရားရဲ့တရားတော်က … Read more
တဈသကျမှာ တဈခါဖူးမွျောဖို့ ခဲယဉျးလှသညျ့ ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရား၏ အံတျော
June 13, 2020 by Padaethar
တဈသကျမှာ တဈခါဖူးမွျောဖို့ ခဲယဉျးလှသညျ့ ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရား၏ အံတျော တဈသကျမှာတဈခါ ဖူးမွှျောဖို့ ခဲယဉျးလှတဲ့ ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားရဲ့ အံတျောကို ဖူးလိုကျပါ ကံထူးလို့ ဖြာပုံသူဖြာပုံသားမြားနှငျ့ မွနျမာ တဈပွညျလုံးမှာရှိတဲ့ ဖူးခြိနျတနျ ဖူးထိုကျလို့.ဖူးမြှျောခှငျ့ရလို့ ထငျပါပွီ။ ကြှနျတျော ကလေးဘဝတညျးက ဘိုးဘိုး ၊ဘှားဘှား၊ဘိုဘေး အစဉျအဆကျကတညျးက ဖြာပုံမှာ ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရား အံတျောနှငျ့ ဆံတျောတဈဆူ ကိမျးဝပျနတေယျလို့ သိခဲ့ရပါတယျ ရှေးဟောငျး သမိုငျးအစဉျအလာအရ ရှေးကတြဲ့ မွို့တှကေ အမညျနှဈလုံးတညျးနဲ့ အမညျပေးခဲ့တဲ့ တခြိနျကမှနျဒသေတှပေေါ့။ ပုဂံ၊ရနျကုနျ၊တှံတေး၊ဒလ၊သထုံ၊ဖြာပုံ၊ပုသိမျ၊စတဲ့ ရှေးကတြဲ့ မွို့တှေ အမြားကွီးပေါ့။ အဲအထဲမှာ မှနျဘုရငျမြား အဆကျဆကျအုပျစိုးခဲ့တဲ့ ဖြာပုံဆိုတဲ့ ထမငျးစြေးမွို့ကလေး တဈခုလညျး ပါဝငျခဲ့တာပေါ့၊ ကြိုကျပတိုငျး စတေီတျောမွတျကွီးကို မွနျမာ သက်ကရာဇျ(၆၀၀)ခုနှဈမှာ တညျထားကိုး ကှယျခဲ့တယျ လုပျဥကုနျ ကြိုကျခမှမျ … Read more
မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်ကြွခဲ့ပါသလဲ ? 🙏🙏🙏
မတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်ကြွခဲ့ပါသလဲ? ၁။ ပထမအကြိမ် မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၄) ခုနှစ် ဒုတိယဝါ သက်တော် ၃၆ နှစ်တွင် ဖိုးဦးတောင် ( ပြည်မြို့အနီး ) သို့ကြွချီတော်မူသည်။ ပြည်ရွှေဆံတော် စေတီပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။ ၂။ ဒုတိယအကြိမ် မဟာသက္ကရာဇ် ( ၁၁၁ )ခုနှစ် ဝါတော်( ၈ ) ဝါ သက်တော် ၄၃ နှစ်တွင် သုဝဏ္ဏဘုမ္မိ သထုံပြည်သို့ ရဟန္တာအရှင် ဂဝံပတိမထေရ်၏ ပင့်လျှောက်ချက်အရ ရဟန္တာ ( ၅၀၀ )တို့ နှင့်အတူ ကြွချီတော်မူသည်။ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။ ၃။တတိယအကြိမ် မဟာသက္ကရာဇ် (၁၁၃) ခုနှစ် ဝါတော် (၁၀) ဝါ သက်တော် ၄၅ … Read more
ဝါတွင်း (၃)လ ရက်ပေါင်း(၉၀)စိပ်တဲ့ ကိုးနဝင်း ပုတီးစိပ်နည်း 🙏🙏🙏
ဝါတှငျး (၃)လ ရကျပေါငျး(၉၀)စိပျတဲ့ ကိုးနဝငျးပုတီးစိပျနညျးလေး စိပျရမဲ့ ရကျလေးတှေ သကျမှတျပွီးပါပွီ ဒုတိယဝါဆိုလပွညျ့နေ့(ဓမ်မစကွာနမှေ့ သီတငျးကြှတျလပွညျ့နေ့)ထိဖွဈပါတယျ သကျသတျလှတျလညျး စားစရာမလိုပါဘူး အခြိနျလညျး တိတိကကြစြိပျစရာမလိုပါဘူး နတေို့ငျး မှနျမှနျစိပျဖို့ပဲလိုပါတယျရှငျ့ စိပျမဲ့ နရေ့ကျမြား ၉ပါးစလုံးကိုနတေို့ငျးတဈပတျစီ အရဟံ (၁)ပတျ သမ်မာသမ်ဗုဒ်ဓေါ (၁)ပတျ ဝိဇ်ဇာစရဏသမ်ပန်နော (၁)ပတျ သုဂတော (၁)ပတျ လောကဝိဒူ (၁)ပတျ အနုတ်တရောပုရိသဒမ်မသာရထိ (၁)ပတျ သတ်ထာဒဝေမနုဿာနံ (၁)ပတျ ဗုဒ်ဓေါ (၁)ပတျ ဘဂဝါ (၁)ပတျ 3.. 8 . 2020. မှ 11. 8 . 2020 အထိ အရဟံ သိဒ်ဓိ (၉)ပတျ 12.8 .2020 . မှ 20 . … Read more
ရွှေပေါ်ကျွန်းဆရာတော်ကြီး ချီးမြှင့်ခဲ့သောအိမ်ထောင်ရေး စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အတိုက်အခိုက်ကင်းလိုလျှင်
ရှပေျေါကြှနျးဆရာတျောကွီး ခြီးမွှငျ့သော အစှမျးထကျသော ကြောကျခဲကငျြ့စဉျ ဤ အစှမျးထကျသော ကြောကျခဲကငျြ့စဉျ သညျ သီးသနျ့ ခြီးမွှငျ့ခဲ့သော ကငျြ့စဉျထူး ဖွဈသညျ။လူသိနညျး ၍ ရှားပါးသော ကငျြ့စဉျ ဖွဈသညျ။အထူးသဖွငျ့ ဤကငျြ့စဉျမှာ လှယျကူပွီး ထိရောကျမှု့ရှိသညျ။ ထူးခွားပွီး လှယျကူသညျ့ ကငျြ့စဉျ ဖွဈ သဖွငျ့ အခွား အခွား သော ကငျြ့စဉျမြားကဲ့သို့ ဂါထာမန်တနျ မြား ရှတျဖတျရခွငျး ပုတီးစိပျရခွငျး မှေးနံ အညှနျ့အခကျ အရှကျပနျး မြား ဘုရား အား ဆကျကပျ လှုဒါနျးရခွငျး အုနျး ငှကျပြော လကျဖတျ ကှမျးယာ အလငျးတိုငျ အခြိူရညျ ပနျး စသညျတို့ ဆကျကပျ ရခွငျး တို့မပါရှိပါ။ရိုးရိုး ရှငျးရှငျး ဖွဈပွီး လှယျကူ သညျ့ … Read more
သမ်ဗုဒ်ဓေ ဂါထာတျောကွီးအား ဂါထာစှမျးအား နှငျ့ စီးပှားရေးလာဘျလာဘပှငျ့လာအောငျ ရှတျဖတျပူဇျောနညျး..
June 12, 2020 by Padaethar
နံနက် အရုဏ် တက်ချိန် ၅ နာရီ တွင် သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်ကြီး အား ရွတ်ဖတ်ရပါမည် ။ရွတ်ဖတ်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလျှင် ကိုယ်လက် သန့်ရှင်းခြင်း ခန္ဓာကိုယ် သန့်ရှင်းခြင်း သန့်ရှင်းသော အဝတ်စားကိုဝတ်ဆင်ခြင်း ရဟန်းမှန်သမျှ ဒေသနာကြားခြင်း ကိစ္စ ကိုဆောင်ရွက်ရပါမည် ။၅၁၂၀၂၈ ဆူကုန်သော ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့အား ရည်စူး၍ဆွမ်း ၉ ပွဲ ရေ ၉ ခွက် ပန်း ၉ ပွင့် ဖယောင်းတိုင် ၉တိုင်ထွန်း အမွှေးတိုင် ၉ တိုင် ထွန်း ၍ ကပ်လှုပူဇော်ရမည်။ပြီးနောက် ၅ ပါး သီလ တော်ကို ခံယူဆောက်တည်ပါ ။နတ်များကို ဖိတ်ကြားရပါမည်။ဖိတ်ကြားပုံမှာ ….” ကျွန်ုပ်သည် ၅၁၂၀၂၈ ဆူကုန်သော ဗုဒ္ဓ … Read more
သကျတျော ၁၁၆ နှဈ နောငျတခိုဆရာတျော ဖူးထိုကျသူမြား ဖူးကွပါနျော 🙏🙏🙏
သကျတျော ၁၁၆ နှဈနောငျတခိုဆရာတျော-ဖူးထိုကျသူမြားဖူးကွပါနျောသကျတျော ၁၁၆ နှဈရှိနပွေီဖွဈတဲ့နောငျတခိုဆရာတျောရဲ့ ဓါတျပုံကို ဖူးထိုကျသူမြားဖူးမြှျောစရေနျ တငျပွပေးလိုကျပါတယျ… သကတြော ၁၁၆ နှဈနောငတြခိုဆရာတြော-ဖူးထိုကသြူမွားဖူးကှပါနြော သကတြော ၁၁၆ နှဈရှိနပှေီဖှဈတဲ့နောငတြခိုဆရာတောရြဲ့ ဓါတပြုံကို ဖူးထိုကသြူမွားဖူးမွှောစြရနြေ တငပြှပေးလိုကပြါတယသြကျတျော ၁၁၆ နှဈနောငျတခိုဆရာတျော-ဖူးထိုကျသူမြားဖူးကွပါနျော သကျတျော ၁၁၆ နှဈရှိနပွေီဖွဈတဲ့နောငျတခိုဆရာတျောရဲ့ ဓါတျပုံကို ဖူးထိုကျသူမြားဖူးမြှျောစရေနျ တငျပွပေးလိုကျပါတယျ…သကတြော ၁၁၆ နှဈနောငတြခိုဆရာတြော-ဖူးထိုကသြူမွားဖူးကှပါနေ သကတြော ၁၁၆ နှဈနောငတြခိုဆရာတြော-ဖူးထိုကသြူမွားဖူးကှပါနောသြကတြော ၁၁၆ နှဈရှိနပှေီဖှဈတဲ့နောငတြဆရာတောရြဲ့ ဓါတပြုံကို ဖူးထိုကသြူမွားဖူးမွှောစြရနြေ တငပြှပေးလိုကပြါတယြ… သကျတျော ၁၁၆ နှဈနောငျတခိုဆရာတျော-ဖူးထိုကျသူမြားဖူးကွပါနျောသကျတျော ၁၁၆ နှဈရှိနပွေီဖွဈတဲ့နောငျတခိုဆရာတျောရဲ့ ဓါတျပုံကို ဖူးထိုကျသူမြားဖူးမြှျောစရေနျ တငျပွပေးလိုကျပါတယျ… သကတြော ၁၁၆ နှဈနောငတြခိုဆရာတြော-ဖူးထိုကသြူမွားဖူးကှပါနသကေတြော ၁၁၆ နှဈရှိနပှေီဖှဈတဲ့နောငတြခိုဆရာတောရြဲ့ ဓါတပြုံကို ဖူးထိုကသြူမွားဖူးမွှောစြရနြေ တငပြှပေးလိုကပြါတယြ… credit Zin Mar သက်တော် … Read more
ဘုရားရှိခိုး မပျင်းနဲ့ . . . (ဘုရားရှိခိုး ပူဇော်ရသော အကျိုး ရှစ်မျိုး )
ဘုရားရှိခိုး မပျင်းနဲ့ အချိန်ဖြုန်းတဲ့ အလုပ် မဟုတ်ဘူး တစ်နေ့လုံးသုံးဖို့ စိတ်တန်ခိုး ထုတ်လုပ်တာ စိတ် ဓါတ်ဆီ ထည့်တာ စိတ် စက်ဆီ ဖြည့်တာ။ သန့်စင်တဲ့ စိတ်ဖြစ်အောင် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို ရေနဲ့ ဆေးတယ်လို့မှတ် စက်ကရိယာတွေကိုဆေးကြောသန့်စင်တယ်လို့ စိတ်ထဲ မှာ နှလုံးသွင်း ထား။ ဘုရားရှိခိုး မပျင်းနဲ့(ဘုရားရှိခိုး ပူဇော်ရသော အကျိုး ရှစ်မျိုး ) ဘုရားရှိခိုး မပျင်းနဲ့(ဘုရားရှိခိုး ပူဇော်ရသော အကျိုး ရှစ်မျိုး ) ဘုရားရှိခိုး တာ ဘုရား ဂုဏ်တော် ပွားတာ မေတ္တာပို့ တာ ထွက်လေဝင်လေ စူးစိုက်ပြီးမှ ငါးမိနစ် ဆယ်မိနစ် တရားထိုင် တာဟာကျန်းမာရေး လဲရ … Read more
သရဏဂုံ သုံးပါးကို အမွဲမပကျြရှတျ ဆိုပှားမြားသော ပုဂ်ဂိုလျ ရရှိနိုငျသော အကြိုးတရားမြား…
June 11, 2020 by Padaethar
မိမိ ၏ အဆွေ ခင်ပွန်း များကို မည်သူကမျှ ပျက်စီးအောင်မပြုလုပ်နိုင်ခြင်းစသည့် အကျိုးတရားတို့ဖြင့် ပြည့်စုံနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် … အလွန်အလုပ်များ၍ တရားအားထုတ်ရန်အတွက် အချိန်မရသောသူများသည် သရဏဂုံသုံးပါးကို အမြဲမပြတ် ရွတ် ဆိုပွားများသင့်ပါသည်။ သရဏဂုံ သုံးပါးကို အမြဲမပျက်ရွတ်ဆိုပွားများသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် အောက်ပါ အကျိုးတရားများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၁။ ဒိ သာသု ပူဇိတော ဟောမိ။ သွားလေရာ အရပ်တိုင်း၌လေးစားမြတ်နိုးခြင်းခံရမည်။ ၂ ။ တိက္ခပညော။ ဉာဏ်အလွန်ထက်မြက်မည်။ ၃။ သဗ္ဗေ ဒေဝါနုဝတ္တန္တိ။ နတ်တို့၏ စောင့်ရှောက်ခြင်းခံရမည်။ ၄။ အမိတဘောဂံ လဘာမဟံ။ စီးပွားရေး အဆင်ပြေမည်။ ၅။ သုဝဏ္ဏဝဏ္ဏော သဗ္ဗတ္ထ။ ဖြစ်လေရာဘဝတိုင်း၌ ရုပ်အဆင်းအလွန်လှပမည်။ ၆။ ပဋိကန္တော ဘဝါမဟံ။ ဖြစ်လေရာ … Read more